Igwe mkpuchi mkpuchi mmiri IP68 IP68 | LEDIA Lighting
Mpempe akwụkwọ IP68 dị mma maka iji n'èzí site n'èzí, nke zuru oke maka ngwa mmiri.
IP68 na-agbanwe agbanwe / ip68 teepu Light / ip68 Ìhè / IP68 Light / Mmiri Mgbanwe Mgbakwunye / Mmiri Ederede / Thin Liw maka Swing Pool / teepu maka ọdọ mmiri.
Kwesịrị ekwesị maka ọdọ mmiri, ọkụ n 'n'èzí, ìhè dị n'èzí wdg.
Igwe mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mmiri IP68
Echiche ohuru: Echiche ndi mmadu na-echegharị ma dechaa ya site na ndị na-eme atụmatụ nke ndị na-emepụta ihe na-emepụta echiche. Ọ bụghị naanị na echiche ndị a ọ bụghị naanị izute ụkpụrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ahịa na ahịa chọrọ.
1.Gịnị bụ uru ide mmiri ide mmiri nke chisia nke dị n'ụlọ ime ụlọ?
1. E wuru ya nke ọma na ọdịdị ụlọ ọdịnala, na-enye afọ ojuju na arụmọrụ dị mma na arụmọrụ dị elu, kwesịrị ekwesị iji n'okpuru -40 ℃ - + 113 ℉ - + 113 ℉ - + 113 ℉ - + 113 ℉). 2. O nwere ihe dị na 120lp na nhọrọ nke 4000K / 5000k / 5700K, na-ejikwa ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mma, na-eme atụmatụ ndụ>50000hrs. 3. Ọ na-abịa na nha atọ dị iche iche, sitere na 50w ruo 240w, nwere akụkụ dị iche iche, gụnyere mkpịsị aka, tonnion,
2. Kọọ ya iji kpụ ọkụ n'ọnụ?
A na-eme ka mma nke linear na-eme ka ọ dị mfe. A na-eme ka ụwa na-emeghe ụwa nke na-eme ka ọ dị mma, ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na nkọwapụta dị iche iche. Dị ka, na-enye ohere ịme atụmatụ na-enweghị njedebe. Otutu nke na-enwu enwu, usoro na ikuku na ikuku na-enweta iji tinye aka na ulo gi nile.
3.Ha ịhọrọ ezigbo ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ maka ugbo ime ụlọ?
1.Chouse na-eme ka ihe dị elu iji chekwaa ike ma nwekwuo ike ọkụ. 2.choose nke na-eme ka ihe dị iche iche dị iche iche maka osisi dị iche iche. 3.Chouse na-eme ka ihe dị iche iche dị n'ụzọ ziri ezi maka ngwa dị iche iche na-eto eto, dịka nwa osisi, okooko osisi, wdg. 4.Chouse na-eme ka usoro nrụnye kwesịrị ekwesị iji hụ na ọkụ ọkụ ahụ anaghị emerụ ihe ọkụkụ ahụ na ọkwa niile.
IJIRURU: Iji nye ihe owuwu dị elu, anyị na-enwe ọkpụrụkpụ& Siste mma usoro nke ọma.
2.30,000 Square Meta
3.become onye otu nke usoro obodo Kọmitii Mmekọ nke China
4.inquiry: Ndị ahịa na-ekwupụta ụdị ihe achọrọ, nkọwapụta arụmọrụ, usoro ndụ, na nnabata chọrọ.
Banyere ọkụ dị iche iche
Guzobere na 2004, Guangzhou Ghan Limining Co. Ihe karịrị ndị injin 30 nwere ahụmahụ na CNAS na-anwale njikwa usoro, gụnyere ọkụ ọkụ na-egosi ndị na-eme ihe dị elu, gụnyere ọkụ na-eme ka a na-eme mkpọtụ ma na-esikwa ọkụ na-eme ka ihe dị mma. Ha niile bụ DLC / Ul / ETL / Tuv / Saa / OA / EEC tozuru oke. Ebe ọ bụ na ntọala ya, ndị Diden bụ na-elekwasị anya na ọrụ OEM / ODM ma zụlite ngwaahịa ndị a na-eme ka ọ dị iche iche. N'oge anyị na-eme ihe ngwa ngwa, obi dị ya ụtọ ịhụ ndị ha na ha na-eme ka ha buru ibu ma sie ike karị n'ahịa ha na-aga n'ihu na mmekọrịta anyị siri ike n'afọ na-abịanụ!
Uwe elu na-etolite ọkụ- (usoro) Headlọ